Af-Soomaaligu Ma Intii Hore Uunbaa Mise Wuu Koraa: Macalin Siciid Saalax Axmed
. Abdirasak Salah |
. Abdirasak Salah
Macalin Siciid Saalax muddo ka badan konton sano ayuu macalin soo ahaa, haddana si ka duwan sida laga filan karo daaddiisa, waxaa ka muuqda fir-fircooni
· “Waayaha adduunyada
· Waxaa lagu abbaaraa
· Aragtidu ku naaxdaa
· Ku abyami kas iyo maan
· Ilayskii ka baxa iyo
· Anfac iyo aqoontii
· Alif la kor dhebeey
· Alif la hoss dhebeey
· Alif laa goday”
· “Ambo-qaadka geediga
· Sida awrta loo raro
· Heesaha u gaarka ah
· Waxa lagu aloosaa
· Magaca Eebbeheeniyo
· Addin iyo af wada jira
· Alif la kor dhabay
· Alif la hoos dhabay
Siciid Saalax Axmed – Heestii ‘Alif La Kor Dhabay’ Maryan Cali Muudeey iyo Kooxdii Iftin (Riwaayaddii ‘Iftiinka Aqoonta’, 1974)
Waayo arag iyo fogaan aragu waa laba sawrac oo bani aadamka
lagu suntado. Macne ahaan way isku dhaw yihiin, mansab ahaanse way kala dhigan yihiin. Waayo-arag waxaa loogu yeedhaa ruuxa; ayni badan jiray (Mararka qaar waabu yaraan karaaye); dhul, duruufo iyo xaalado badan oo kala duwan oo nololeed la soo darsay. Waayo-aragu wadcigii iyo waayihii uu soo maray ayuu ku furdaamiyaa dabarada iyo surgimaha isku tigtiga joogtada nololeed ee uu markaa ku jiro. Fogaan-araguse (inkasta oo ay kalmaddu ka da’ yar tahay tan hore) waa ruuxo; maamin kara, odorosi kara, ifafafaalaha, ka soo qaad, boqol sanadood ka dib. Taxanaha soo yaalay, tagtadii illaa joogtada ayuu ku dhereriyaa ta soo maqan.
Waayo-arag kastaa ma noqdo fogaan arag, fogaan-arag kastaase waxa ay u dhaw dahay in uu waayo-arag yahay. Haddii aynu si kale u dhigno, fogaan-aragnimadu waa darajo ka dambaysa waayo-aragnimada oo uu qofku gaadho. Waa sidii qof taagan meel, oo fakaagga uu haystaa ay tahay hal talaabo oo gadaal uu u qaadi karo – waa waayo aragnimada’e – marka dambena hela tallaabo kale oo uu hore ugu ruqaansado. Sidaas ayay waayo-aragga iyo fogaan-araggu iyaga oo wada jira ay qaybaha kala duwan ee nololeed; tagtada, joogtada iyo ta soo maqanba u lafo guraan.
Shayba sheekh lehe, afka Soomaaliga qudhiisu, maadaama aanu af qoraal ku dhisan ahayn, hadii uu qoran yahayna aanu intiisa badan ahayn wax macne wayn ku fadhiya, waxa uu noloshiisaa dheer ku soo jiidhay, ee uu bad, barri iyo buurba kaga soo gudbay waa; Af-maalka, iyo Suugaanyahanka, oo labadoodaba ay ku duugan tahay waayo-aragnimo iyo fogaan-aragnimo muush ah oo la xidhiidha afka iyo samatto bixiisa.
Waa kulan casho-wadareed ah iyo Maqaayadda Hiddo-Dhawr iyo mid ka mid ah habeenno dhawr ahaa oo aan ka mid ahaa dadkii is xilqaamay ee Carwada Bandhigga Buugaagta Hargaysa ka qayb qaatay. Marti iyo mudanba meesha waa lagu dhannaa.
Waxa aan socod meel dhexaad ah ku marayaa. Mid ka mid ah wadiiqooyinka ku aroora ardaayadda Hidde-Dhawr. Waxa meel dhaw igaga soo baxay mid ka mid ah Odayaashii mudakarka ahaa ee Bandhigga Buugta Hargeysa Martida ku ahaa(inkasta oo uu farsamo ahaan marti ahaa, haddana macne ahaan isaga ayaa marti loo ahaa). Waa nin aad caan u ah dadka badidiisuna ay si aan baydh baydh lahayn ay u yaqaanaan.
Waxa ag iyo daba boodaya raxan kale oo ay wada socdaan, oo ay ku jiraan odayaal la ayni, milgo iyo maamuusba ah. Maadaama ay jireen, su’aalo maankayga miranaayay oo intii uu fagaaraha wax ka jeedinayay aan ka mashquulay waydiintood, markan ayayse ii soo martay. ‘Allaylehe miyaad faqba ku warsatid odayga!’ ‘Haye iyo Hawraarsan’. Nabdaadin ka dib, waxaan markiiba ku gudbay su’aashii duunka ii gashay. Waa mid la xidhiidha aqoonta uu buuniga ku yahay, awalse aan waayay cid si qoto leh iiga qancisa.
“Adeer, Af-Soomaaligu ma intii hore uun baa; mise wuu koraa?”
“Ma cidbaa jirta kugu tidhi ma koro?”ayuu codkiisii kala bax-baxsanaa, ee deggenaa, wajji urursan oo yaab ka muuqdo iigu jawaabay.
“Maya, laakiin aniga ayuunbaa is waydiiyay” ayaan ku celiyay.
Malahayga, markii hore in aan dood ku jalbeebinayo ama cidi i marin habaabisay ayuu u qaataye, hadduuse aqoonsaday waxa aan u soo joojiyay. Wadiiqo hore iyo gadaalba loo sunsumayo ayaanu taagnayne, inta uu sidii uu dariiqa iga duwayo garabka isoo qabtay, oo laba tallaabo si wada jir ah waddadii gees uga baxnay ayuu si deggen oo xushmad iyo qadarini ka muuqato iigu jawaabay;
“Adeer heedhe, af-Soomaaligu wuu koraa… Maalin walba iyo Saacad walba wuu koraa. Kalmaduhu suuqa ayay ka abuurmaan, marka dambena sidaas ayay ku qaramoobaan [qaamuuska ku galaan]; Imika imisa kelmedood oo suuqa ka baxay, dadkuna ay isticmaalaan ayaad taqaan?…”
“…Way badan yihiin; garashadaydana gabi ahaantoodba waa af-guri ama af-suuq… hal erey baan arkay oo ah hal-abuur cusub; Mootaddan Sadde- lugoodlaha ah, markii ugu horaysay ee ay Boorama timaad saddex magac ayay dadkii ula kala bexeen; Kuwii hore u yaqaanay waxa ay yidhaahdeen magaca ay Hindidu u taqaan oo ah ‘Bajaaj’; Kowo kalena meel ay ka keeneenba ‘Tick’ ayay ugu kittaab dayeen; kuwo saddexaadbaa jira oo u baddan dadkeenna caamoda ah, waxaanay ku gaabsadeen uun magac ka unkamay dhawaaqa uu sameeyo Motoorka saaran Gaadiidkan oo ah ‘Kudhi-kudhi’. Kan u dambeeya ayaa iila ekaaday kalmad rasmi ah oo af-Soomaali ahaan loo adeegsan karo, qaamuuskana aynu ku darsan karno… Kalmado sidaas ah oo si quman (standard-ah) loo adeegsaddo ayaanse sheegayaa” ayaa inta aan hadalka ku jaray aan si boobsiis ah maadaama uu waddo taagnaa aan u idhi.
“Taasi way fiican tahay, Laakiin afku mid suuq iyo guri iyo gobol toona ma kala laha ee afku waa af uun, ka suuqa lagaga hadlo ayuunbaa marka dambe xaasil noqda… Ma maqashay; ‘Dhabarka I Tus’, ‘Cagaha Wax Ka Day’ Haddeer waynu la yaabnaa inanka yar ee ama qurbe ku dhashay, ama ku barbaaray ee garan waaya, wakhti baase jirtay ay ceeb ahayd in ay afka Soomaaliga ka mid ahaadaan. Tusaale ahaan, Konton sano ka hor in la odhan jiray baa laga yaabaa “Af Soomaaligii Cagaha Wax Ka Day’ buu marayaa!’. Konton sanno ka dibna maxaad filaysaa? Dee [way ku cabtay! Iyo way maraysaa, iyo qaar kale oo badan] ayaa afka ka mid noqon doona…”
Macalin Siciid Saalax Axmed– ciddii taqaannaa way taqaanaaye – waa rukun wayn oo ay afka, dhaqanka iyo suugaanta Soomaaligu ay si guud iyo si gaar ahba u mahadiyeen. Imika maan baran magac iyo mansab ahaanba. Markii ugu horraysay ee aan magiciisa maqo, Maadaama aanu magaca aabbaha isaga mid nahay, waxa aan si fiican u xusuustaa; aniga oo u yar sagaashamaadkii horaantiisii, in marka uu soo galo barnaamijkii waxbarashada ee ka bixi jiray idaacaddii Radio Ethiopia, heestii summadda u ahayd ee ‘Alif La Kor Dhabay…’ ay dhegta igaga soo dhici jirtay dadka dhegaysanaya ama meelahaa ka ag dhaw oo leh “Heesta Siciid Saalax baa Sameeyey” markaasbaan is waydiin jiray ‘Oo tolow siciidkaasina ma ku aydin walaalo tihiin oo kalaa?’ Madaama uu magucu dadka ku yar yahay. Waa cawo iyo ayaan ii soo kordhay mar haddaan horjoogsaday, waxna aan su’aalay maskaxdii ay ka soo maaxatay ‘Iftiinka Aqoonta’ oo ahayd riwaayaddii ay ku jirtay isla heestaasi.
Macalin Siciid Saalax muddo ka badan konton sano ayuu macalin soo ahaa, haddana si ka duwan sida laga filan karo da’addiisa, waxaa ka muuqda fir-fircooni iyo u heelanaan badan oo uu u qabo in uu cid wax u baro. Haddiiba xilli aan habboonayn oo uu meel marayo ama uu hawl kale haysto – sida tan hadda na dhex martay oo kale – ay cidi hakiso oo wax waydiiso, illaa cidda la socotaa ay gacanta qabato oo ay ‘bas, ina keen’ ku tidhaa waa nin aan daalayn, dhibsanayn oo aan kaa dhaqaaqayn.
Xaasha’e tiiyoo ay buunbuunini reebban tahay; haddii cidi ay af-Soomaaliga taqaan, Macalin Siciid waxa uu afka Soomaaliga u yaqaan sida uu magiciisa u yaqaan si la mid ah. Waa badwayn. Mawduucyada uu afku koobsado, qodobadda ka sii farcama, laamaha iyo dhegaha waa nin dhud dhud u raacay.
Waxaa aad la yaab u leh, marka ay afka iyo arimihiisa noqoto, halka uu wax ka arki karo. Shan boqol oo sano ayuu inaga dambeeyaa, shanna wuu inaga horeeyaa. Waxa uu kuu sheegayaa afka Soomaaliga iyo sidii uu ahaa Xiligii Cusmaaniyada (laga soo bilaabo qarnigii 13-aad). Waxa taas ka sii yaab badan, waxa uu si sahal ah u odorosi karaa, intaas in leeg oo mustaqbalka soo socda ah (sida sheekadan na dhex martay). Waxa uu Alle ku ilhaamiyay=
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa aan shaashadaha ka daawaday, isaga oo dal ka mid ah kuwa yurub su’aal lagu waydiiyay ahayd “Qurbaha intii aanu joognayn, hawlo badan oo haweenka gaar u ahaa ayaanu qabanay oo ay ka mid tahay daryeelka ubadka (Babysitting), markaa suugaanta suugaan ahaan maxaanu ku sabaalaynaa ubadka?”
Ismaba dhibin. Kuye “Dee iyaba [dumarku] way samaysteene, idinna samaysta oo alifta bog la yidhaa ‘Suugaanta Ragga ee Ubadka’”. Tolow maxaad is leedahay rag badan oo meelahaa indho adayg la soo fadhiista shaashaduhu in ay su’aashaas kaga jawaabi lahaayeen?
Macalin Siciid Saalax, iyo rag badan oo la ayni, aqoon, waayo-aragnimo iyo fogaan-aragnimoba ahi waa inaga buuxaan. Way buuxaan da’ yar u heellan in ay dadka caynkaas ah ee ilaahay caqliga iyo garashada siiyay ay wax ka dheefsadaan oo ka bartaan. Balse wali maan garan sababta ilaa hadda kala irdhaysay, ee odayada aqoontaas leh ka horjooga in ay hadh iyo habeenba ina hor joogaan oo shaashadaa tiro beelay ee uu bayd gaabku hadh-beelay raggaas wakhti ay umadda dhaxalka ay u hayaan ay ugu hiddiyaan loogu diiday!